कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला की हैजा ? १० दिनसम्म आएन दिसा परीक्षणको रिपोर्ट | ईमाउण्टेन समाचार
कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला की हैजा ? १० दिनसम्म आएन दिसा परीक्षणको रिपोर्ट
असोज २६, २०७८ पढ्न ७ मिनेट
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा खानेपानीको माध्यमबाट झाडापखाला फैलिएको पुष्टि भएको छ । रोग प्रभावित क्षेत्रबाट संकलन गरिएकाे पानीको १५ नमुनामध्ये ९ मा इकोली भेटिएको छ ।
सार्वजनिक भएन राेगकाे कारण
नगरपालिकाको वडा नं. ७, ८ र ९मा पहिलोपटक रोग देखिएको १० दिन बितेकाे छ । १७ असाेज आइतबार पहिलोपटक शिवराज अस्पतालमा बिरामी आउन सुरु भएको थियो । सोमबार बिरामी हुनेको सङ्ख्या १०० नाघेको थियो । बिरामीको अवस्था र रोग फैलिने दर हेर्दा हैजा फैलिएको शंका गरिको थियो । १८ गते पाँच जना बिरामीको दिसाको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा एक जना बिरामीलाई हैजा देखिएको थियो ।
केही दिनअघि शिवराज अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई हैजाको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । अस्पताल निकट स्रोतबाट परीक्षण भएकामध्ये केहीलाई हैजा देखिएको बुझिएकाे छ । तर सोको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । हैजा परीक्षणका लागि फेरि पाँच बिरामीको दिसाको नमुना काठमाडाैं लगिएको छ । सुरुमा लगेको नमुना औषधि सेवन भएका बिरामीको भएकोले औषधि नखुवाइएको बिरामीको दिसाको नमुना परीक्षणका लागि लगिएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६८८ बिरामीकाे विवरणअनुसार बिरामी हुनेमा धेरै बालबालिका छन् । कार्यालयका अनुसार ११ वर्षभन्दा कम उमेरका २११ बालबालिकाका बिरामी भएका छन् । यस्तै ११-२१ उमेर समूहका २१४ जना छन् । ५४ प्रतिशत महिला प्रभावित भएका छन् । मंगलवार बिहानसम्म प्रभावित हुनेको सङ्ख्या ७५८ पुगेको छ । जसमध्ये ७०३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । हाल शिवराज अस्पतालमा १४ जना उपचाररत छन् भने ४१ जनालाई कपिलवस्तु अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गरिएको शिवराज अस्पतालका चिकित्सक मुकेश चौधरीले बताए ।
६ जनाकाे मृत्यु, सरकार भन्छ तीन मात्रै
स्वास्थ्य कार्यालयले झाडापखालाका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा ४५ वर्षका पुरुषकाे घरमा, एक जना ७ वर्षीय बालकको निजी क्लिनिकमा र ५ वर्षीय बालिकाको अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ । तर समुदायमा थप तीन जनाको झाडापखालाको कारण मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा शिवराज नगरपालिका-८ कोटवाका एक महिला, कृष्णनगर नगरपालिका सुखरामपुरका २७ दिनको एक शिशु र बहादुरगञ्जकी एक महिलाको गर्भ तुहिएको छ । २७ दिने शिशुको निमोनियाको कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य‐मा वर्गिकृतKapilbastuNews, lumbenipardesh
ब्लड बैंक नभए पछि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका रगतको भरमा बिरामी
दोलखामा झाडापखालाको प्रकोप बढ्यो, एकको मृत्यु
दाङमा फैलिएको झाडा-पखाला प्रकोप नियन्त्रणमा
जाजरकोटमा फैलिएको रोग ‘सिजनल फ्लु’ भएको पुष्टि